Macron iyo Le Pen oo isku khilaafay mamnuucidda xijaabka
From left, French President Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen .
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka soo horjeestay qorshe ay musharraxa la tartameysa Marine Le Pen ku dooneyso in ay dumarka Muslimiinta ah uga mamnuucdo in ay goobaha dadweynaha ku xirtaan xijaabka, xilli isha lagu hayo codadka dadka Muslimiinta ah ee wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha dalkaasi.
Le Pen ayaa 24-ka bishan isku dayaysa in ay ka guuleysato Macron oo raadinaya in uu markii labaad sii hoggaamiyo Faransiiska.
Inkastoo saadaasha dadweynuhu ay muujineyso in Macron uu horreeyo, haddana waxa ay sheegayaan in Macron oo dhexdhexaad ah iyo musharraxa midigta fog ay aad isugu dhow yihiin marka loo eego doorashadii labadooda dhexmartay 2017-kii.
Falanqeeyayaasha ayaa u nisbeeyay sare u kaca Le Pen in ay ugu wacan tahay iyada oo isu muujisay in ay tahay musharrax dhexdhexaad ah, iyo in ay tahay qof awood u leh in ay wax ka qabato dhibaatooyinka ay ka mid yihiin sicir bararka.
Laakin mid ka mid ah siyaasadaha ad-adag ee Le Pen oo ka soo horjeeda soogalootiga aysan wali dabcin waa sida ay uga soo horjeeddo xijaabka ay xirtaan dumarka Muslimiinta ah, iyadoo sheegtay in haddii ay guuleysato ay haweenka ka mamnuuci doonto in ay xijaabka ku xirtaan goobaha lagu kulmo ee Faransiiska.
Macron ayaa dhanka kale ku doodaya in siyaasadaha Le Pen aysan ka duwaneyn kuwii xagjirka ahaa ee xibisbiga National Front (FN) ee uu aas-aasay aabeheed Jean-Marie.
Isagoo Talaadadii booqanayay bariga magaalada Strasbourg ayuu Macron waydiiyay gabar xijaaban in ay xijaabka u xiratay dookheeda ama lagu qasbay.
Haweeneydan oo isku tilmaamtay in ay tahay qof xuquuqda dumarka u doodda ayaa sheegtay in ay tahay dookheeda.
Macron ayaa yiri isaga oo farta ku fiiqaya qorshaha Le Pen: “Tani waa jawaabta ugu wanaagsan ee hadallada xanafta leh ee aan maqlayay.”
Khamiistii oo uu booqasho ku tagay magaalada dekedda leh ee Le Havre ayuu yiri: “Ma jiro hal dal oo caalamka ah ka mid ah oo mamnuucay xijaabka, ma waxa aad rabtaan in aad noqoto dalka ugu horreeya?”
Macron ayaa si cad u og ahmiyadda ay leeyihiin codadka ku dhowaad shan milyan oo Muslimiin Faransiis ah kuwaasi oo lagu qiyaasay in ay boqolkiiba sagaal ka yihiin bulshada dalkaasi.
Sida ay sheegtay odoros ay sameysay the Ifop pollster, 69% codbixiyeyaasha Muslimiinta ah ayaa wareeggii koowaad codkooda siiyay musharrax saddexaad oo ah Jean-Luc Melenchon.
Soo jiidashada codadkii uu helay Melenchon ayaa loo arkaa in ay muhiim u tahay Macron si uu u xaqiijiyo in uu ku guuleysto wareegga labaad.